विराटनगरको अर्थतन्त्र खस्केको अवस्थामा छ : अध्यक्ष थापा | Makalukhabar.com
चैत्र, ५ विराटनगर । विगत २० वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको विराट व्यापार सङ्घ, उद्योगी व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन हो । व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गर्दै आइरहेको सङ्घको अध्यक्ष पदको कार्यभार ९ महिनादेखि सुजन थापाले सम्हाल्दै आइरहेका छन् । लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा सक्रिय थापासँग हाल विराटनगरमा रहेका व्यवसायीहरूको अवस्था, चुनौतीको विषयमा रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
विराट व्यापार सङ्घको अध्यक्ष पदभार सम्हाल्नुभएको ९ महिने यात्रा, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
कुनै सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्न त्यति सहज त नहुँदो हो तर पनि हालको समय अवधिसम्म ठिकै छ ।
विराट व्यापार सङ्घको हालसम्मको गतिविधि के कस्तो छ ?
विराट व्यापार सङ्घ २० वर्षदेखि व्यपारीहरुको हक, हितका लागि खुलेको संस्था हो । विगतदेखि हालसम्म व्यापारीहरूको हक, हितका लागि नै अगाडि बढिरहेको छ । व्यपारीहरुको कुनै पनि समस्या साथै समस्याको समाधानको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारमा होस् या स्थानीय निकायसँग आवाज उठाउने गर्दछौ । धेरै कुराहरू त हाम्रो पहलमा समस्याको समाधान भएको पनि छ । अहिलेसम्म यी नै विषयमा निरन्तर हाम्रो सङ्घ लागिरहेको छ ।
उद्योग सङ्गठन, मोरङ व्यापार सङ्गठन हुँदा हुँदै विराट व्यापार सङ्घ किन ?
विराट व्यापार सङ्घमा साना व्यवसायीदेखि ठुला व्यवसायीसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ । उद्योग सङ्गठनमा उद्योगी साथीहरू हुनुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ साना व्यापार गर्नेदेखि लिएर ठुला इन्डस्ट्री गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । सबै हिसाबका धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यहीँ भएर विराट व्यापार सङ्घ आवश्यक परेर स्थापना गरिएको हो ।
सङ्गठनमा रहेर तपाईँले के कस्ता काम गर्नुभयो ?
कामको हिसाबमा त धेरै नै गरेका छौँ । सरकारी निकायबाट आउने कार्यालय प्रमुखहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँहरूसँग अन्तरक्रिया (छलफल) गर्छौँ । म अध्यक्ष हुने बित्तिकै जुन केन्द्रीय सरकारले ल्याएको कर नीति ३,४ वटा इस्युहरु थिए । त्यसमा विराट व्यापार सङ्घको नेतृत्वमा त्यसको विरुद्ध आन्दोलन मेरै नेतृत्वमा भएको थियो । आन्दोलनमा अन्य संस्थाले पनि सहभागिता जनाएका थिए । केही समय पश्चात् सम्बोधन भयो र एउटा समिति निर्माण भयो । त्यो आन्दोलन हामीले रोक्नु पर्‍यो । नेपाल सरकारबाट बनेको समितिबाट खासै त्यस्तो उपलब्धि त देखिएको छैन । यसका अलावा हाम्रो सङ्घले विभिन्न निकायसँग प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायको सरकारसँग विभिन्न सरकारी कर्मचारीका प्रमुख जस्तै भन्सार, सुरक्षा निकायसँग अन्तरक्रिया गरी उहाँहरूसँग भएका समस्या साथै हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भएका समस्या लिएर राख्छौँ । हाम्रा समस्याका विषयहरू प्रहरी प्रमुख, सिडिओ, साथै भन्सार प्रमुख ज्युहरूले साथै विभिन्न निकायबाट राम्रो नै भूमिका निभाइदिनुभएको छ ।
चुनौतीहरू नि ?
चुनौती त धेरै नै छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न धेरै नै गाह्रो छ । विभिन्न तीन तहको करको कुराले पनि गाह्रो भइरहेको छ । कर लाद्ने काम भइरहेको जस्तो आभास भइरहेको छ । नयाँ, नयाँ कर नीतिहरूले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको अवस्था छ । करका दायराहरू धेरै नै बढ्दै गएकोले व्यवसाय क्षेत्र बढ्ने भन्दा पनि घट्दो अवस्थामा छ । भेकल टयाकिङ आयो धेरै व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । ठुला व्यवसायीहरू त म्यानपावर हुन्छन् । साना साना व्यापार व्यवसायीहरूलाई गाह्रो परेको छ । त्यसमा पनि सीमा क्षेत्र नजिक भएकाले, अधिकांश उपभोक्ताहरू सस्तोका लागि जोग बनी नै पुग्ने गर्दछन् । विराटनगरको बजार सुनसान नै देखिन्छ । यो विषय जुनसुकै फोरममा उठाइ नै रहेका छौ । स्थानीय निकायको सरकारसँग पनि यो विषयमा कुरा उठाइरहेका छौ । धेरै चुनौती छ । हामीले राज्यलाई घचघच्याउने हो, समस्यालाई राज्यले सुन्दिनु पर्‍यो भन्दै आवाज उठाउने हो । हामीले राज्य र व्यापार व्यवसायी गर्ने साथीहरूका लागि पुलको काम गरिदिने हो । यो समस्याका लागि राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम दिनरात नै गरिरहेका छौ ।
विराटनगर औद्योगिक, व्यापारिक हिसाबले इतिहास बोकेको ठाउँ हो, व्यवसायमा यस्तै चुनौती आइपरे यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र कस्तो रहला ?
हाल विराटनगरको अर्थतन्त्र खस्केको अवस्था मा छ । त्यसमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बजार सुनसान छ । यातायात पातलिएको छ । पहिलेको जस्तो भिडभाड छैन बजारमा मार्केटमा पैसा अभाव छ । मार्केटमा पैसा सङ्कलन गर्न जाँदा व्यापारीहरूसँग पैसा छैन । आर्थिक मन्दी झनै जटिल होला जस्तो देखिरहेको छु । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र जटिल देखिन्छ ।
राज्यको तर्फबाट व्यवसायीहरूका लागि कस्तो खालको नीति भए राम्रो हुने थियो ?
हामीले कर नतिरेसम्म राज्य पनि चल्दैन । हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले कर नतिर्ने भन्ने होइन । कर तिर्न तयार छौँ । तर कर मात्रै बढाउने होइन । करको दायरा बढाए पनि कर नबढाइदिए राम्रो । करको दायरा भित्र अझै व्यापारीहरूले ध्यान दिएका छैनन् । भारतबाट आएर व्यवसाय गरेर आफ्नो देश फर्किरहेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय निकायको करले पनि छुँदैन । न केन्द्र करले छुन्छ न भन्सारमा कर तिर्नु पर्छ । भारतबाट आएर हटिया बजारमा आएर व्यापार व्यवसाय गरेर फर्किने क्रम बढेको छ । उनीहरूलाई कुनै करको दायराले छुँदैन । यहीँ बसेर व्यवसाय गर्नेहरूले कर तिर्नु पर्छ । घर भाडा तिर्नु पर्‍यो । यस्ता करका दायरालाई राज्यले पहिचान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशतले घट्यो यातायात
पुरुषको तुलनामा महिलाको क्षमता दोब्बर छः अष्टलक्ष्मी शाक्य
फागुन २५, काठमाडौं । आज ११० औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस, विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सन् १९०९ (वि.सं.१९६६) देखि विश्वका महिलाहरुमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न देशहरुले फरक–फरक दिनमा नारी दिवस मनाउँदै आएकामा सन् १९९४ देखि भने हरेक वर्षको अंग्रेजी महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइ... जारी राख्नुहोस...
‘महिला भएकोमा हेपियो भनेर ठान्दिन, तर अप्ठ्यारो पार्न खोज्छन्’
झण्डै २० वर्ष स्थानीय निकाय हाल स्थानीय तह कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झण्डै ३ वर्ष पुग्न थालेको छ । यो अवधिमा केही परिवर्तनका काम भएको सवैले अनुभुती गर्न थालेका छन् । तत्कालिन स्थानीय निकायको भन्दा हालको स्थानीय तहको अधिकार फराकिलो भएकाले जनप्रतिनिधीहरुलाई काम गर्ने अवस... जारी राख्नुहोस...
‘कांग्रेसलाई समाप्त पार्न कम्युनिस्टहरु लागि परेका छन्’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिं लामाले मुलुकको विकासका लागि नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षका सपना बाड्नु वाहेक केही गर्न नसकेको बताएका छन् । मकालु खबरसँगको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद लामाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको पनि दावि गरे । बर्तमान सरकारले संस्था... जारी राख्नुहोस...
‘सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ’ डा. काेइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिमा छुटाउनै नहुने नाम हो । डा. कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिमा आवश्यक भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । चिकित्सक पेशाबाट राजनीतिमा उदाएका डा. कोइरालालाई कोइराला खानदानको राजनीति संहाल्ने ब्यक्तिका रुपमा समेत चर्चा गरिन्छ । यद्यपि,डा. कोइराला... जारी राख्नुहोस...
‘केपी ओली सरकारमा जाँदै गर्दा नेपालको ढुकुटी रित्तो थियो, अहिले भरिएको छ’
नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको आरोप लगाईरहँदा सत्ता पक्षका सांसदहरु भने आरोप मान्न तयार छैनन् । संघियता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा दुई तिहाईको सरकारले अभूतपूर्व उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपनि असफल नभएको नेकपा सांसदहरुको भनाई छ । संघियता कार्यान्वयन, संघिय ऐन कानुन निर्माण तथा शुशासन कायम... जारी राख्नुहोस...
‘जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं’
नेकपाको सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ओली सरकारमा जाने ब्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहँदा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादव भने मधेशका मुद्दालाई संवोधन नगरी सरकारमा जानुको औचित्य नरहेको जिकिर गर्छन् । राजपाले २ नं. प्रदेशमा नेक... जारी राख्नुहोस...